National News – Page 338 – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
अब सर्वाेच्चका यी ७ न्यायाधीसले लोकमानको मुद्दा हेर्न नपाउने
काठमाडौं । अख्तियार प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिबारेको फैसला पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतका ७ जना न्यायधीले सो मुद्दाको सुनुवाई गर्न नपाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा हाल रहेका २० जना मध्ये ७ जनाले लोकमानको मुद्दा हेर्न नपाउने भएपछि अब १३ जनाले सो मुद्दा हेर्न पाउनेछन् । न्याय प्रशासनसम्बन्धी नयाँ कानूनको आधारमा सो मुद्दा सुनुवाइ […]
जनसेना भ्रष्टाचारका दोषीलाई चोख्याउन दाहालको दौडधुप !
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल जनसेनाको रकम भ्रष्टाचारमा मुछिएकालाई जोगाउन कम्मर कसेर लागेको खुलेको छ । शान्ति प्रक्रियाको सुरुआतसँगै देशभरमा ७ वटा मुख्य र २१ वटा सहायक शिविरमा राखिएका जनसेनाको व्यवस्थापनको रकममा यसअघि नै व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको विषय अख्तियारमा पुगेको थियो । केही दिनअघि मात्रै अख्तियारले […]
बरालको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय समिति गठन
चितवन । क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ चितवनको भेलाले सूर्य बरालको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय जिल्ला कार्य समिति गठन गरेको छ । समितिको सचिवमा सरोज उपरकोटी र कोषाध्यक्षमा प्रेम कंडेल चयन भएका छन् । समितिका सदस्यहरुमा रोशन थापामगर, विनय ढुंगाना, कृष्ण परियार र अनिता वि.क चयन भएका छन् । भेलाले दुई जना सदस्य पछि थप गर्ने निर्णय गरेको […]
राजनीतिक दलसँग तिहार महोत्सवबारे अन्र्तक्रिया
बुटवल । नेपाल राष्ट्रिय उद्योग ब्यापार संगठन बुटवल शाखाको आयोजनामा आगामी कात्तिक ४ गतेदेखि १५ गते सम्म बुटवलमा हुन लागेको तिहार महोत्सव राष्ट्रिय औद्योगिक कृर्षि पर्यटन प्रर्वद्धन प्रर्दशनीको विषयमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधीहरुसँग छलफल भएको छ । मेलालाई कसरी सफल बनाउन सकिन्छ र कसरी अगाडि लैजादा उपयुक्त होला भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरुसंग छलफल भएको हो । […]
राजधानीका विद्यालयमा बम आतंक, दुई विद्यालयमा विस्फोट, दुई पक्राउ
काठमाडौं । राजधानीका विभिन्न विद्यालयमा मंगलबार विहान बम फेला परेपछि बम आतंक नै फैलिएको छ । राजधानीको बौद्धस्थित आकाशद्धिप बोर्डिङ स्कुल र मनकामना उच्च माविमा बम बिष्फोट भएको बौद्ध प्रहरीले जनाएको छ । विष्फोटमा कुनै मानवीय क्षति भने भएको छैन । बम विस्फोटबाट आकाशद्धिप स्कुलको गेटमा क्षति पुगेको छ । प्रहरीले विस्फोटमा संलग्न भएको आशंकामा […]
ओलीको राष्ट्रवाद नक्कली, संविधानले प्रचण्डलाई लेण्डुप दोर्जे बनायो : गजुरेल
काठमाडौं । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का वरिष्ठ नेता तथा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उठाएको राष्ट्रवादको नारा खोक्रो र नक्कली भएको बताएका छन् । राजधानीमा संविधान जारी भएको दिन ‘असोज ३’ लाई कालो दिवसको रुपमा मनाउन क्रान्तिकारी माओवादी नेवाः राज्य समितिले आयोजना गरेको प्रदर्शन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गजुरेलले अहिलेको […]
शुल्कवृद्धि फिर्ता गर्न अखिल (क्रान्तिकारी)को ४८ घण्टे अल्टिमेटम
चितवन । शैक्षिक सत्रको बीचमा चितवन जिल्लाको प्याबसनले अभिभावकको ढाड भाँचिने गरी शुल्कवृद्धि गरेको भन्दै अखिल क्रान्तिकारी चिवनले निजी बोर्डिङ स्कूलहरुलाई बृद्धि गरिएको शुल्क फिर्ता गर्न ४८ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ । संगठनका जिल्ला अध्यक्ष अमृत चपाईले आइतबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै यस्तो अल्टिमेटम दिएका हुन् । ४८ घण्टाभित्र शुल्क फिर्ता नगरिए लेखा शाखामा तालाबन्दी […]
घरमा ढुंगा बज्रिँदा एकै परिवारका ४ को मृत्यु
बुर्तिवाङ । बाग्लुङको बोगादोभानमा घरमाथिबाट खसेको ढुंगाले च्यापिदा एकै परिवारका चार जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा बोगादोभान गाविस वडानम्बर–४ रिक्लाङका ३८ वर्षीया भिमकुमारी रोका, उनकी १४ वर्षीया छोरी इन्द्रकुमारी रोका, १२ वर्षीया छोरा इन्द्रजित रोका र ९ वर्षीया छोरी मायादेवी रोका रहेका छन् । सोमबार बिहान करिब चार बजे उनीहरु घरमा सुतिरहेको समयमा […]
दाउन्ने साप्ताहिकको सातौं वार्षिकोत्सव तथा कृति विमोचन सम्पन्न
शोभा जिसी, कावासोती । दाउन्ने साप्ताहिकको सातौं वार्षिकोत्सव कार्यक्रम सोमबार नवलपरासीको कावासोतीमा सम्पन्न भएको छ । नवलपरासीको कावासोतीबाट प्रकाशन भईरहेको दाउन्ने साप्ताहिकको सातौं वार्षिकोत्सवको अवसरमा सदानन्द अभागीबाट लिखित कृति सिंहबाहिनी महाकाव्यको विमोचन समेत गरिएको थियो । कृतिको पूर्व स्थानीय विकास राज्यमन्त्री घनश्याम यादवले विमोचन गरेका थिए । सिहंबाहिनी महाकाव्य दाउन्ने साप्ताहिकले प्रकाशनमा ल्याएको हो । […]
अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री दाहालले किन स्थगित गरे अमेरिका भ्रमण ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अमेरिका भ्रमण अन्तिम समयमा आएर रद्ध भएको छ । राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन दाहाल सोमवार अमेरिका जाने कार्यक्रम थियो । अन्तिम समयमा आएर दाहालले आफ्नो अमेरिका भ्रमण स्थगित गरेका हुन् । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि नबढाइ अमेरिका गएमा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको थियो । संशोधन प्रक्रिया […]
प्राध्यापकद्वय यादवले भने– ‘हामी क्रान्तिकारी माओवादी निकट प्राध्यापक संगठनमै आबद्ध छौं’
एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन खोज्नु राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी दलालहरुको राष्ट्रघाती कुकृत्य : क्रान्तिकारी माओवादी